စင်ကာပူ မှာ အလုပ်ရှာရသော အခက်အခဲများ - Open Engineering For Myanmar
Home » AutoCAD » KPZ
» စင်ကာပူ မှာ အလုပ်ရှာရသော အခက်အခဲများ
ကျွန်မဘလော့ကို နေ့တိုင်းပို့စ်မတင်နိုင်ပေမယ့် ဘလော့အတော်များများကို နေ့တိုင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့က AutoCAD နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာတစ်ချို့ကို ဖလှယ်ထားတဲ့ဘလော့ပါ။ အခုပို့စ်ကတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ပို့စ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မသွားဖတ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့က ပို့စ်တစ်ခုကို AutoCAD နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အလုပ်ရှာတဲ့လူတွေ သိသင့်တယ်ထင်လို့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တစ်စုတစ်တည်းဖြစ်အောင် တင်ပြလိုက်တာပါ။ မူရင်းပို့ကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ သွားဖတ်ပါနော်။ ခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့ ကိုစိုင်းထွန်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောပါရစေ။ စင်ကာပူ မှာ အလုပ်ရှာရသော အခက်အခဲများ အင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက် ကပေါ. မြန်မာပြည် မှာနေရင်း စင်ကာပူမှာ သွားအလုပ်လုပ်ချင်တော. စင်ကာပူ က အလည်ပြန်လာတဲ.ကိုကို၊မမ တွေရဲ. စကားတွေ နားစွင်.ရတာပေါ.။ သူတို.တွေရဲ. အပြောအရ စင်ကာပူမှာလောလောဆယ် Draft man (Auto CAD)အလုပ်ဟာ ရှာရလွယ်တယ် ပေါ.နော်.။ ဒါကြောင်. ကိုယ်လဲ မြန်မာပြည် မှာ Auto CAD ကိုဇောက်ချ လေ.ကျင်.လိုက်ပါတော.တယ်။ သင်တန်း တွေ တက်တယ်ပေါ.နော်။ ဒါနဲ. လာမယ် လာမယ် နဲ. လုပ် တာ စိတ်က ပါပေမယ်. ငွေက မလိုက်နိုင်တော. ငွေစုရင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ထိရောက်သွား တာပေါ.။ စလုံး ကို လာဖို.လဲ အားလုံးသေသေချာချာ ပြင်ဆင်ရတယ်နော်။ မြန်မာပြည် ကတည်း က သူငယ်ချင်း ကို နေစရာ တနေရာ ရဖို. ၁ လလောက်ကြိုပြောရတယ်။ အဲ.လိုမှ မဟုတ်ရင် ရောက်လာလို. နေရာစရာ မရ လို. တည်းခိုခန်း တွေ ၊ သူများ အိမ်ဧည်.ခန်းတွေ ကပ်ပြီး အိပ်ရတာ တွေ ဖြစ်မယ် လို. သူငယ်ချင်းကပြောပြထားတယ်လေ။ စလုံးကိုလေယာဉ်ဆိုက်တဲ. အချိန် က သူငယ်ချင်း ရဲ. အလုပ်ချိန်ဖြစ်နေလို. လိပ်စာ ကို Taxi ဆရာ ပြပြီး နေရမဲ. အိမ်ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ချီတက်လာရတယ်လေ။ စလုံးက တရုတ်တွေ က တော်တော် ကိုသဘောကောင်းတယ် ခင်ဗျ ရွဲ.ပြောတာ၊ Taxi ဆရာ ကလဲ တိုက်ခန်း (Block)အောက်မှာ ထိုးရပ်ပေးတယ်လေ။ ဒီတော. ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ကိုယ်.အထုပ်အပိုးတွေ ကို ကားနောက်ဖုံးကနေ ဆွဲချရတယ်ပေါ.။ ဒါကို ကူညီမယ် မရှိပဲ အဲ.နေ.က မိုးရွာ နေတော. သူကားနောက်ဖုံး ရေစိုမှာ ဆိုးလို. "အမြန်လုပ် ကားနောက်ဖုံး ရေစိုကုန်တော.မယ်" လို.တောင် မာန်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါကတခု။ နောက်တခု က အခန်း က အပေါ်ထပ်မှာ ဆိုတော. တက်ရတာပေါ. ဓါတ်လှေကားနဲ.။ တိုက် က ဓါတ်လှေကား ၂ စင်း ရှိတော. မဟုတ်တဲ. ဘက်ကို မှားတက်သွားမိတော. လုံးဝ ကိုလမ်းပျောက်တော.တာပေါ.။ တိုက်နံပါတ်ကလဲ တူနေတယ် ဘာလို.ရှာမတွေတာတုန်းဆိုတော. တိုက်ခန်း တခုက ထွက်လာတဲ. တရုတ်မ ကြီးကို မေးတယ် တိုက်ခန်း နံပါတ် xx-xx က ဘယ်မှာ တုန်း ဆိုတော. "Don't Know" ဆိုပြီး အခန်းတံခါး ကိုဆောင်.ပိတ်ပြီး သူ.အိမ်ထဲ သူဝင်သွားတယ်လေ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မသိဘူးလို.ပြောရင် သေမယ်ထင်မယ်နော်။ ပုံစံ က သူအိမ်ရှေ.ထွက် လေညင်းခံ နေတာ ကို နှောက်ယှက်ခံရတဲ. မျက်နှာပေါက်နဲ.။ သြော် နောက်ဆုံးမှ အောက်ဆင်း ပြီး နောက် ဓါတ်လှေခါးနဲ. တက်မှ စလုံးက ကိုယ်.ရဲ. Home Sweet Home လေးကိုရောက်ပါတော.တယ်။ သူငယ်ချင်း က အိမ်သော.ကို အိမ်ရှေ.က ရူးဖိနပ် ထဲ ထည်.ထားတယ် နိူက်လိုက်လို.မှာထားလို. နိူက်ပြီး အိမ်ထဲ ရောက်ပါတော.တယ်။ ဟူး မောလိုက်တာ။
ကဲ လုပ်ငန်း စပြီဗျိုး ညှားပြီ www.jobstreet.com , www.jobsdb.com တို. Strait Time သတင်းစာ တို.နဲ.။ အလုပ် ကတော. လျှောက်တယ် ၁ နေ.ကို ၅ ခုနှင်.အထက်။ အဲ.ဒါတောင် ၁ ပတ်လုံးမှ အင်တာဗျူးက ၂ ခုလောက်ရရင်ကံကောင်း။ တခါ ကြုံဖူးလိုက်တယ် ဖုန်း ၀င်လာတယ်လေ ကိုယ်ပြောတဲ. အင်္ဂလိပ် လေသံကို နားထောင် ပြီး "Where are you from?" လို.မေးတယ်လေ။ ဒါနဲ. ဖြေတာပေါ. "MYANMAR" လို.။ ပြန်ပြောတယ် စလုံးမ က "Sorry, BURMA CANNOT" ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားပါလေရဲ.။ အင်း မလွယ်ပါလားနော်။ ခေတ်ဆိုတာလဲ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် က ခေတ်စားတဲ. အလုပ်ဈေးကွက် နဲ. ၂၀၀၈ ခုနှစ် အလုပ်ဈေးကွက်နဲ. မတူဘူးလို.ပဲ ကျွန်တော်ယူဆ လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော. မြန်မာပြည် ကနေ Draft man အလုပ်နဲ. လာရှာတဲ. သူ ပေါများ လာတော. အလုပ် ရှာရတာ ခက်ပြီး လစာကလည်း အင်မတန်ကို လျှော.နည်း သွားလို.လေ။ စင်ကာပူရဲ. အလုပ်သမား ၀န်ကြီးငှာန ရဲ. rule အရ Special Pass (SP)တစ်ယောက် ရဲ. လစာ က ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ အနည်းဆုံးရတဲ.သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော. ဒုက္ခရောက်တော.တာပေါ.။ ဒါပေမယ်. အချို.သော ကုမ္ပဏီ တွေလဲ နားလည်မူနဲ. လစာ ၁၈၀၀ အောက် ရပေမယ်. S Pass ကို ၁၈၀၀ နဲ. လျှောက်ပေးပြီး နောက်မှ အချင်းချင်း သဘောသူညီမူ ယူစားပြီး လစာ ထဲ က ပြန်ဖြတ်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
Draft Man အလုပ်တိုင်း ၁၈၀၀ အောက် ရတယ် လို.တော. မဆိုလိုဘူးပေါ.လေ။ တချို. လုပ်သက်ရှိ တဲ. ကျွမ်းကျင်တဲ.သူတွေ ဆိုလဲ ဒီထက်မကရကျပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော. အလုပ်အတွေ.အကြုံမရှိတော. အစခက်တာပေါ. လေ။ Draft man အလုပ်ဆို ရင် ၀က်ဆိုဒ် ကနေ ရှာ တာ ထက် သတင်းစာကို ပိုအားကိုးရတယ်။
စလုံး မ - Sorry. I think my boss won’t agree with that. You go home and wait lah. Let me discuss with my boss. သိတာပေါ. ဒီလိုပြောပြီး ပထုတ် လိုက်တာ။ ကျွန်တော်. စိတ်ထင် သူတို. က စင်ကာပူ လူမျိုးတွေ ပဲ အလုပ်ခန်.ဖူးတဲ.ကုမ္ပဏီ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ MOM ရဲ. စည်း ကမ်း ချက်တွေ ကို နားမလည် တော. ကြောက်တာနေမှာပေါ.။ အစကတော. ဖုန်းမျှော်သေးတာပေါ.။ နောက်တော. အဲ.ကုမ္ပဏီ က ကျွန်တော်လျှောက်ထားနဲ. ရာထူးနဲ. သတင်းစာထဲမှာ ပြန်ပြီးကြော်ငြာ ထပ်ဝင်တယ်လေ “Singaporean and PR only need to apply” တဲ.။ ဒါဆိုသဘောပေါက်။
အခုတော. မရတော.ဘူးလေ။ ပုံစံ က ခေါင်းပန်းလှန် ရမယ်။ ခေါင်း က မြန်မာ ၊ ပန်း က မလေး ပေါ.။ ဒီတော. ငါ မလေးရှားရင် ပြန်ဝင်လာလို. Stay မရသည်ထားဦး မလေးရှား ကို ပါ အဆစ် ရောက်ဖူးမယ်။ ဟိုက ကျောင်းတက်နေတဲ. သူငယ်ချင်းကလဲ "စိတ်မပူနဲ. လာခဲ. စလုံးရောက်တုန်း မလေး လာလည်ပေါ. ကွ ကံကောင်းရင် စလုံး ပြန်ဝင်လို. ရရင်ရမှာ၊ မရတော.တော. မလေး ရောက်တာ အမြတ်ပေါ. " လို.တော. မလေး ကို စိတ်ယိုင်သွားပြန်ရော။ ကြားရပြန်ပါတယ် နောက်တယောက်ဆီ က။ "ဘာလို.မလေးရှားသွားမှာလဲ။ စလုံးကို ပြန်ဝင်လာလို.မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မင်း ၂ ခါ ကုန်ဖြစ် မှာပေါ.။ မြန်မာပြည် ကို ပဲ ၁ ပတ်လောက် ပြန်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာရင် Visa သက်တမ်း က ၆ လ ထိ တောင် ရတယ်" လို. ဆိုပြန်ပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့အတွေ.အကြုံတွေကို အခုလိုတင်ပြပေးတာ တကယ်ကိုလေးစားပါတယ်။